FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA MUDI DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Mudi Dog
'Quetzalcotl Smoke, Mudi 2 taona fotsy fotsy. Mudik dia haingana dia haingana ary mila efitrano malalaka hihazakazahana. Mudik dia karazana henjana ampiasaina amin'ny andian'ondry, kisoa ary omby. '
Ny Mudi dia manana loha miendrika wedge ary orona maranitra. Ny valanoranony dia hozatra miaraka amin'ny kaikitry ny hety. Ny karan-doha dia mirohotra miaraka amin'ny fijanonana voamarika tsara. Boribory lavalava ny maso ary volontany mainty. Ny sofina dia miarina amin'ny endrika 'V' ambony ambany. Manana thorax lalina izy io. Tsy mahazatra ny teraka ireo alika kely tsy misy rambo. Mahitsy ny lamosina ary somary lava. Ny tongony aoriana dia somary nahagaga ny nametrahana azy. Fohy ny volo eo amin'ny molotra, manjary mibontsina amin'ny sofina. Ny palitaony matevina sy miloloha olioly dia 5 santimetatra ny halavany miaraka amin'ny volo manjelanjelatra izay mamorona savony ary mora karakaraina. Ny lokon'ny palitao dia misy mainty, fotsy, mena, volontany, volondavenona, mofo mena ary lava. Misy koa loko tsy dia fahita firy antsoina hoe 'cifra' (manga-merle), izay mainty na volondavenona maivana ary mifangaro amin'ny loko mainty, misy pentina, mariky, voaloto, marbra. (Ny loko mety ho palitao dia tsy misy fetrany amin'ity karazany ity.)
Alika tsy fahita firy ny Mudi. Ireo tompona vitsy izay mampiasa sy mankafy ny Mudi dia mahita azy tsy manan-tsahala. Ny lisitry ny talenta toa tsy manam-petra miaraka amin'ny toetrany mahafinaritra dia nahatonga azy ho alika ambony eo amin'ny canine. Mahira-tsaina fatratra, ny Mudi dia afaka mianatra haingana toy ny a Border Collie na haingana kokoa aza. Mahery vaika sy be herim-po tokoa, ny Mudi dia tsy matahotra na inona na inona, na dia ny kisoa bibidia aza, izay afaka mandresy azy haingana. Izy io dia mahatonga alika mpiambina tsara. Tena be fitiavana sy malemy paika ao amin'ny fianakaviana izy ary noho izany dia nahazo fankasitrahana toy ny alika mpiara-miasa izay, raha ilaina izany, dia hiaro ny fananana sy ny olona. Ao anatin'ny fianakaviana dia manana fironana hifamatotra amin'ny olona iray manokana koa izy. Mudik dia mety mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra. hifanerasera tsara izy ireo, tsara kokoa amin'ny fahazazany. Ny sasany tsy hanatona olon-tsy fantatra mandra-pahitany fa sariaka ilay olona ary tsy te handratra azy. Tsy masiaka izy ireo rehefa mifanena amin'ny olona tsy fantany fa mila zatra fotsiny. Hanao tsara amin'ny ankizy izy ireo raha tsaboina amin'ny fomba izay hitany olona ambonin'izy ireo ao amin'ny entana baiko . Mudik dia sariaka amin'ny alika hafa ary tsy maninona biby fiompy tsy kaninina raha tezaina miaraka amin'izy ireo izy ireo hatramin'ny alika kely na nampidirina tsara ho toy ny biby fiompy vaovao ao an-trano. Io dia hankatò ary mpiara-milalao, fa indraindray afaka mitabataba. Mila ampianarina izy ireo mba tsy hibontsina tsy amin'antony. Hanao asa tsara i Mudik. Mila tompona mahalala ny fomba izy ireo mifampiresaka tsara ny lalàna sy izay manam-potoana fanatanjahan-tena isan'andro.
Hahavony: 14 - 20 santimetatra (38 - 47 cm)
Milanja: 18 - 29 pounds (8 - 13 kg)
Ity dia karazana salama somary salama, na dia nisy tranga sasany aza ny tsy fahampian-tsakafo, nefa tsy dia maro loatra.
Ny Mudi dia afaka miaina ao anaty trano iray raha toa ka ampy fampiharana izany, mila toerana mihazakazaka sy milalao izy ary ho tsara kokoa raha tsy tazonina ao anaty iray. Ity karazana ity dia mazoto miasa ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny. Ity karazana ity dia afaka miaina any ivelany.
Ny Mudi dia karazany miasa tokoa. Mila raisina isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging, izay amboarina ny alika eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny fehin-kibo, toy ny mason'alika, ny mpitarika ny kitapo no mitarika ny lalana. Ho fanampin'izany, ny alikanao dia handray soa amin'ny faritra lehibe sy azo antoka izay ahafahany mandositra maimaimpoana. Mudik mila hazakazaka be dia be sy fanazaran-tena hafa mba ho salama tsara. Tian'izy ireo ny milalao ary hiavaka amin'ny karazana fanatanjahan-tena toy ny Flyball sy Frisbee.
Mbande mora ny Mudi. Ny fikosehana sy ny fikosehana tsindraindray hanalana ny volo maty no ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny anarana feno an'ny Mudi dia Canis Ovilis Fenyesi (nampisaraka an'i Mudi tamin'ny Puli sy Pumi i Dr. Dezso Fenyesi). Ny alikan'ny mpiandry omby hongroà dia voasokajy avokoa hatramin'ny taona 1930, rehefa nisaraka tamin'ny Mudi Puli SY Pumi . Toa tsy vokatry ny fiompiana nomanina ity karazana tambanivohitra tanjona rehetra ity. Niforona ho azy ny karazany ary zato taona monja izy. Mahalana izy io, na dia any Hongria aza - ny firenena niaviany. Ny fampifanarahana azy dia niorina tamin'ny voalohan'ny taona 1900 ary ny fenitra nosoratany dia arak'ireo toetra niavaka ireo. Angamba ny ankamaroan'ny antony tsy fahita firy amin'ity karazany ity dia azo lazaina fa misy hatrizay Puli SY Komondor —Fomba fiasa hongroà malaza sy malaza kokoa. Angamba ny alika hongroà tsy dia fantatra loatra, dia marihina noho ny hamaroan'ny fampiasana azy io na ao anatiny na ivelan'ny tanindrazany. Izy io dia mpiandry ondry, mpiandry ondry, mpiandry omby, alika mpiambina, mpihaza bibidia, mpamono totozy sy weasel ary mpiara-miasa aminy. Izy dia afaka mitantana ny ondriny manokana raha tsy ampian'ny kitapo fahatelo. Alika mpamonjy tendrombohitra izy ireo any Finlandia. Raha tsy misy ny fidiran'ny mpiompy voatokana dia ao atahorana ho lany tamingana .
anglisy mastiff mix retriever volamena
'Erika de la Croix Bernifa dia teraka tany Belzika ary nentina tany Etazonia tamin'ny 2006. Manantena ny faharoa izy fako alika kely tamin'ny Aogositra 2009. Tsy latsaky ny 10 litters ny alika kely Mudi teraka tany Etazonia tao anatin'ny 10 taona lasa. Aseho amin'ity sary ity izy miaraka amin'ny zanany kely telo. '
Savvy amin'ny 9 volana izao. Sary natolotry an'i Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Be zom-bolo any anaty ahitra izy - ity ny rain'i Savvy. Sary natolotry an'i Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Savvy ny alika Mudi amin'ny 7 herinandro. Sary natolotry an'i Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Mudis, Maia ary Forras
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Mudi
Sarin'i Mudi 1
ny mpampijaly amerikana ve dia heverina ho omby any an-davaka
mixer mpiady mpiady boxer alemanina